Mijinja | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ahoana ny fomba famolavolana sy fitomboan'ny Physalis
Physalis dia zavamaniry tena mahafinaritra, izay tia ny fahavaratra ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanoherana ny bibikely isan-karazany. Ny sasany amin'ireo karazany ireo dia afaka mamokatra voankazo mahasoa, izay mampitombo ny maha-zava-dehibe ny zavamaniry, ary noho izany dia hifanakalozantsika hevitra etsy ambany ny fomba hitomboan'ny Physalis eo amin'ny faritra misy azy. Physalis: famaritana ny zavamaniry Na dia tsy fantatrao aza ny atao hoe physalis, dia ho hitanao fa mety io zavamaniry tsara tarehy io.
Mitombo ny volombava Ruben ao amin'ny tranokalanao
Blackberry Ruben dia fantatra manerana izao tontolo izao. Tamin'ny taona 2012, ny solontena iray dia navoaka ho an'ny karazany avy amin'ny mpamorona azy, John Ruben Clark, profesora ao amin'ny Oniversiten'i Arkansas, izay nahatonga an'i Etazonia ny toerana nahaterahan'i Notre-Dame Ruben, fa koa karazana varimbazaha hafa. Famaritana ny rakotra rongony Ruben The Remontant varieties of blackberry varieties, izay ahitana ny Blackberry Ruben no voalohany niditra, dia manavaka amin'ny fambolena amin'ny tifitra efa tamin'ny taom-pambolena.
Ny teknolojia mampitombo ny salady romaine ao amin'ny dacha
Ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny antony tokony hampitombo ny salady Romaine amin'ny alàlan'ny anjaranao. Ny salady romanina dia antsoina koa hoe salady Romaniana. Zavamaniry isan-taona izy io, ny raviny dia voangona amin'ny loha karazana. I Romain no heverina ho anisan'ny olo-manan-kaja indrindra sy malaza eran-tany, ary ampiana izany amin'ny salady fanta-daza "Caesar".
Fitsipika momba ny famokarana voanio Savoy amin'ny alalan'ny zana-ketsa
Mampalahelo fa tsy malaza amin'ny fikarakarana ny zaridainanay ny lozolava Savoy ekotika, satria maro no mihevitra fa ny fitomboana dia fisedrana sarotra sy maharitra. Tena marina tokoa, hiteny amin'ity lahatsoratra ity isika. Ny endriky ny karazany sy ny mampiavaka ny voanio savoy Savoy karaoke (Brassica oleracea convar.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Mijinja